Thwebula Shazam 5.11.0 isizulu – Vessoft
Shazam – a software ukuba aqaphele amathrekhi omculo kanye abaculi zabo. Shazam isebenzisa imakhrofoni idivayisi ukuqopha imithombo sound futhi ufanisa siqeshana eqoshiwe ohlukene ne database of the application. Shazam kwenza ukuba iqophe umculo ngaphandle yokuxhuma internet bese uthole ulwazi track by yokuxhuma kwinethiwekhi ngokuzenzakalelayo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuthenga amafayela alalelwayo in Amazon noma ezitolo Play Google, amavidiyo ku-YouTube futhi ulalele umculo ngomsakazo noma Spotify service. Shazam kwenza ukubuka bese wengeza amaculo ayethandwa umtapo umculo izigaba ezahlukene futhi wabelane ngazo nabangani on ukuxhumana nomphakathi.
Izincazelo amagama a ukwakheka musical
Ibonisa ulwazi mayelana artist
Amandla ukubuka amavidiyo ku-YouTube
Amazwana on Shazam:
Shazam Ahlobene software:
Internet Isofthiwe yokuwuthola Ukuvinjwa ezifunda kwemithombo web kanye ufihle real-ikheli le-IP ukuhlala engaziwa kule internet.
English, Afrikaans, Français, Español... The Simpsons: Tapped Out 4.14.0
Imidlalo Lo mdlalo fun wadalwa emva eponymous chungechunge animated. Umdlali ungalindela ezamehlela okuthakazelisayo nabalingiswa ozithandayo.